I-Central Penola, Amakamelo okulala ama-2, Iwayini lamahhala le-Netflix WiFi
U-Robyn unokuphawula okungu-58 kwezinye izindawo.
Jabulela iwayini laMAHHALA le-Coonawarra, i-Netflix ne-WiFi nokuhamba kalula uye ezindaweni ezithokozisayo ze-Penola/Coonawarra ukusuka kule ndawo emaphakathi.Le yunithi enesitayela esihle inamagumbi okulala ayindlovukazi angu-2 yesimanje kuyilapho igcine ubuhle bomhlaba obudala.Iyunithi yakhiwa ngesikhathi lapho uMary UMacKillop wabiza ikhaya likaPenola. Konke ukunethezeka okulindelekile ukuze uhlale uphumule.Hamba uye kumagalari, iminyango yeselula, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela, amakhefi, izindawo zokudlela.Abenzi bewayini, abaculi nezinhlobo zobuciko shayela le ndawo ikhaya.
Akubhenywa, Akunaphathi, Azikho Izilwane ezifuywayo.
I-Bedroom 1 inombhede wosayizi wendlovukazi ovulekile, futhi inesibuko esihle esiphelele futhi esakhiwe kumawodilophu. Kusukela embhedeni, izihlahla zezimbali ezinhle ngaphandle zingabonakala njengesithombe ngefasitela.
I-Bedroom 2 nayo inombhede wosayizi wendlovukazi, futhi nayo isanda kuhlotshiswa ngesitayela sesimanje, kuyilapho uhlamvu lophahla oluhle lwensimbi olucindezelwe lugciniwe. Kunesikhala esanele nokulenga ngeziphanyeko ekamelweni ngalinye.
Igumbi lokuhlala linesiphephetha-moya esibuyisela emuva ukuze uhlale unethezekile, futhi ikhishi elibanzi linefriji, uhhavini nama-hotplates kanye nomshini wokuwasha izitsha ozowusebenzisa, kanye nomshini wekhofi we-Nespresso wekhofi lakho lasekuseni.
Ngeminyango yesiFulentshi eya evulandi elimboziwe, kunesilungiselelo esinethezekile setafula langaphandle, esilungele ukudlela ngaphandle uma ukhetha, futhi kunesilungiselelo esithandekayo ngaphambili ukuze ujabulele ukuphuma kwelanga noma ikhofi ekuseni.
Lona umgwaqo othule, oqanjwe ngo-John Riddoch, omunye wabasunguli bendawo yewayini yasePenola Coonawarra. Iyunithi ingaphakathi kwebanga lokuhamba elilula lokuya ezindaweni ezingokomlando ezihehayo nezicabha zegumbi elingaphansi, kanye namakhefi endawo, amabhikawozi, izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela.
Isikhungo saseJohn Riddoch singama-200m, isikhungo iMary MacKillop singama-200m, iPetticoat Lane iyi-250m, iPipers Restaurant 150m, iRoyal Oak hotel iyi-100m. Iyunithi yethu itholakala emzileni wePenola Historic Building Walking Tour edumile, ukuze ukwazi ukuqala uhambo lwakho ngqo ngaphesheya komgwaqo.
Indawo yewayini eyaziwa kakhulu emhlabeni i-Coonawarra itholakala kuphela imizuzu eyi-10 uma ushayela, lapho ungavakashela khona iminyango eminingi yamaseli, izindawo zokudlela ezisesitayeleni, nemicimbi eminingi. Imigede yaseNaracoorte ingamakhilomitha angama-40, iMount Gambier Blue Lake ingamakhilomitha angama-50, kanti ilokishi laseRobe, namabhishi alo amahle aqhele ngemizuzu engama-35.
Ngiyatholakala ukuze ngisize uma kuvela isidingo ngohlelo lokusebenza lwe-AirBnb.